Minecraft: Story Mode amidy amin'ny € 0,50 ny fizarana voalohany | Androidsis
Ny fizarana voalohany an'ny Minecraft: Story Mode dia amidy amin'ny € 0,50
TellTale Games no niandraikitra ny fitondrana anay ny tantara ambadika ho an'ny Minecraft, iray amin'ireo lalao video tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra izay nitazona ny tarehy foana na tsy nanana izay kofehy iraisana ahafahana manantona ireo mpilalao hiditra amin'ny fiainany manokana. Tsy nilainao akory izany, fa raha mitady tantara mifandraika amin'ity boaty fasika lehibe ity ianao, Minecraft: Story Mode no vahaolana amin'izany.
Androany TellTale Games dia nampidina ny vidin'ny fizarana voalohany an'ny Minecraft: Story Mode amin'ny € 0,50 raha ny vidiny mahazatra dia manodidina ny 5,35 €. Lalao video iray manokana izay hanombohanao manao traikefa mampidi-doza mankany amin'ny faritra hafa amin'ny Overworld, amin'ny alàlan'ny Nether sy ny sisa. Hanatevin-daharana ekipa lehibe manaja ny Order of the Stone malaza ianao: Warrior, Engineer Redstone, Griefer ary Architect.
Toy ny lohateny TellTale Games rehetra, amin'ny Minecraft: Story Mode, ny fanapahan-kevitra raisinao tsirairay dia hisy vokany ao amin'ny kofehy iraisan'ny tantara dia hahita faran'ny samy hafa ianao rehefa mandeha amin'ny lalana iray na hafa. Kalitao tsara hanombohana ny lalao indray hahafantarana izay hitranga raha tsy manampy ny namanao ianao amin'ny fotoana iray hafa dia manampy hafa ianao.
Minecraft: Story Mode zanaka fizarana dimy ary ny tsirairay amin'izy ireo dia misy amin'ny euro 5 mahery. Ny tolotra anio dia ahafahanao mividy ny voalohany amin'ny 0,50 €, fa amin'ny ambiny kosa dia mila mandalo ny vidiny mahazatra ianao hahafantarana izay hoentin'izy ireo aminao amin'ny manaraka.
Una tolotra manokana aleha raha milalao Minecraft ianao matetika ary tsy te-hamoaka vola be ianao hanandramana azy. Ny ambiny amin'ireo fizarana dia miankina amin'ny famporisihan'ny voalohany anao hahafantaranao ny fiafaran'ity anaram-boninahitra vaovao ity amin'ny TellTale Games.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Minecraft » Ny fizarana voalohany an'ny Minecraft: Story Mode dia amidy amin'ny € 0,50
Meizu M3 Note dia aseho amin'ny fomba ofisialy